Pfuma vavhimi mahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Vavhimi vepfuma vemahara kwenguva yakati rebei
Pane kanopfuura kamwe chiitiko isu takataura nezve iye anovandudza G5, imwe yeayo mashoma ayo parizvino anotarisa kuyedza kwayo mukugadzira graphical adventures yeIOS uye macOS, kunyangwe iyo yekupedzisira padiki padiki. Parizvino G5 inotipa nhamba yakakura yemitambo yekudyidzana muApp Store, yese yakabhadharwa. Nguva nenguva, kambani iyi inopa mimwe mitambo yayo mahara kuitira kuti vashandisi vagone kunakidzwa nayo vasina kubhadhara euro imwe chete. Ino nguva mutambo wakasarudzika ndeye Vanotsvaga Pfuma: Chiono cheGoridhe, inowanikwa mune vhezheni ye iPhone uye HD vhezheni ye iPad. iyo iPhone vhezheni inotemerwa pa2,99 euros uye iyo iPad vhezheni pa4,99 euros.
Mumutambo uyu, tinofanirwa kubatana naNelly nemukoma wake kuburitsa zvakavanzika zvemhuri uye kutarisana neruzivo runonakidza. Nelly aigara achirota nezvekutsvaga pfuma yakavanzwa yaambuya vake, pirate uyo akavanza hupfumi hunoshamisa Makore mazhinji apfuura. Vabereki vaNelly pavanomusiya nemukoma wake Tommy, wekupedzisira anonyangarika. Tichafanirwa kugadzirisa kusanzwisisika kutsakatika uko kunotisvitsa isu kune yekare pfuma mepu. Tichafanirwa kuyedza hunyanzvi hwedu kuti tikwanise kukunda mapuzzle uye bvunzo dzakasiyana dzatinowana munzira.
Zvimiro zveVatsvaki vePfuma: Zviratidzo zveGoridhe
Anopfuura makumi mana mazinga akagoverwa munzvimbo nomwe dzakasiyana.
Zvakanakisa mifananidzo inozotinyudza munyaya nenzira inoshamisa.
Mumutambo wese isu tichafanirwa kugadzirisa makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe uye nhamba isingagumi yemitambo midiki iyo inozotiisa pamuedzo nguva dzese.
Inoenderana ne Game Center, kuti tikwanise kutevera mitambo pane yedu iPad kana iPhone.
Inowanikwa muSpanish, Chirungu, ChiFrench, ChiItaly, ChiGerman uye Russian.
Inoda iOS 6.0 kana yakakwira kuti ishande, uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Vavhimi vepfuma vemahara kwenguva yakati rebei
Samsung ichatengesa yakagadziridzwa Galaxy Note 7 mune dzimwe nyika
Kuenderana kwekushandisa ndiko kukuru kweiyo iOS 10.3 beta 3